Golaha wasiirrada Soomaaliya: Maamullada la dhisayo waa iney waafaqaan dastuurka dalka – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Golaha wasiirrada Soomaaliya: Maamullada la dhisayo waa iney waafaqaan dastuurka dalka
Muqdisho – Mareeg.com: Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya Cabdiweli sheekh Axmed Maxamed ayaa maanta shir guddoomiyey kulan aan caadi ahayn oo Golaha Wasiirada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ka yeeshay samaynta maamul goboleedyada dalka.
Golaha ayaa dood dheer ka yeeshay muhiimadda ay leedahay in si waafaqsan dastuurka iyo shuruucda dalka loo sameeyo maamulada gobolada, gaar ahaan deegaanada laga xoreeyey kooxaha nabad-diidka.
Ra’iisul Wasaaraha oo Shirka Golaha Wasiiradda ka hadlayey waxa uu yiri:“Dowladda Soomaaliya waxaa ka go’an samaynta maamulada gobolada ee dalka oo dhan, iyadoo loo marayo si waafqasan dastuurka.
“Maamulada goboladu waxa ay muhiim u yihiin dhismaha qarankeena. Maamuladu waa in ay noqdaan kuwo u dhow bulshada, si dadku u helaan fursad ay kula xisaabtami karaan madaxdooda.
“Waxaa muhiimad leh in mudnaan la siiyo dhismaha deegaanada dhowaan la xoreeyey, si aanay u jirin marnaansho dhinaca ammaanka ah, isla-markaasina la hirgeliyo qorshayaasha dowladda ee lagu dhisayo degaanadaasi.”
Dhinaca kale, Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya ayaa canbaareeyey dil shalay suuqa Bakaaraha loogu geystay wiil dhalinayaro ahaa oo u halgami jiray nabadda iyo arrimaha bulshada Soomaaliya. Wiilkan oo lagu magcaabi jiray Maxamed Cumar Maxamed “Caammir” ayaa waxaa toogasho ku dilay kooxo hubeysan.